Nchịkwa ndị na - achịkwa - A Complete Guide - ITS Tech School
Nchịkọta Mgbasaozi - Nduzi zuru oke
Ntuzi zuru oke maka nchịkwa ndị isi
Nkọwa okwu na Hadoop
Uru nke Hadoop Training
Hadoop Usoro Ọmụmụ
Usoro nhazi usoro nchekwa
N'ime afọ 5, naanị Hadoop ga-eme ihe ka ukwuu n'ime data ụwa. Nkà na ụzụ ọhụrụ ahụ na-ekpo ọkụ, ụlọ ọrụ na-enwekwa mkpa dị mkpa nke ndị ga-enwerịrị akaebe Hadoop.
Usoro mmemme Java Hadoop bụ nanị mmalite-isi na a na-eche maka ịkwadebe nnukwu data dị egwu nke dị n'ime ọnọdụ PC. Dị ka Hadoop jiri ndị ọrụ dị umeala n'obi maka ịkwadebe data ahụ, ụlọ ọrụ na òtù ndị dị ka ma na-adabere na ihe nlereanya ahụ maka ọnụ ahịa ya. Uru dị iche iche nke usoro mmemme ahụ na-emetụta ihe dị iche iche na-akwadebe ụdị data dị iche iche na-ekesa gburugburu, scalability, optimization nke obodo data, nkwado nke nnukwu hub bunches, na njikwa nke ndị na-eme njem na ụzọ ụzọ.
Ngalaba 2 nke ngalaba ochichi Hadoop na-ejikọ MapReduce na HDFS. Hadoop na-eji akụkụ ọ bụla ọganihu na-aga n'ihu n'ime obere ngwugwu data ma ọ bụ lumps ma na-ewepụ data ndị a n'ime ụlọ dị iche iche na iche iche, ụlọ ndị dị n'ime otu. Hadoop bụ onye nwere oge oge na oge ya maka iwepụ nnukwu data ma ọ bụ obere na ncheta nke gburugburu ahụ dị obere. Hadoop na -emegharịkwa data niile dị na igwe dị iche iche nke dị n'ime otu ahụ na mbipụta abụọ ndị ahụ dị kpọmkwem na ihe kpatara ya. Dika akwukwo di iche iche di iche iche nwere ike idozi ngwa ngwa n'otu oge, oge ejizi data emela ka ebelata.
Akaebe nkwado na-egosiputa na i nwere ike iji usoro nchịkwa data mee ka ọ dịkwuo arụ ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ taa na-enyocha ihe nyocha nke Hadoop mgbe niile, nke gosipụtara ndabere na ikike ndị ị nwere dị mma maka ịnweta ọrụ ndị metụtara Big Data njikwa.
Kedu ihe mere na-egosi na ị na-arụ ọrụ?
Hadoop bụ ụzọ ọhụrụ iji jikwa data buru ibu, na ndị ọkachamara Hadoop dị mkpa na mkpuchi, nlekọta ahụike, ego, mkpọsa ngwá ahịa, ike dị iche iche na ọtụtụ ụlọ ọrụ azụmahịa dị iche iche. Mmezu nke Hadoop enwewo oke irè ma ọtụtụ ndị ọkachamara IT agbanwewo ụzọ ndụ ha ka ha wee nweta nkà na ụzụ ọhụrụ ahụ. Ugbu a, a na-akwado Hadoop na Mainframe, Java, na ụlọ nchekwa data na n'ọdịnihu na-abịanụ, usoro ihe ọhụrụ a ga-abụ mkpebi kachasị na nchịkọta data na ịkwadebe.
Ịzụ ọzụzụ na asambodo nwere uru dị iche iche maka ọkachamara ọkachamara IT na freshers.
Asambodo ahụ na-achọ, ụlọ ọrụ ahụ na-achọsi ọrụ ike maka ndị ga-enwerịrị ndị na-enyocha akwụkwọ Hadoop.
Akwụkwọ nchịkọta Hadoop na-ewetara gị ma ụgwọ ma ọrịrị na-arịgo, ị ga-enwetakwa ihe karịa ndị ọzọ mgbe ị gafechara usoro ahụ n'ụzọ dị irè.
Ndị ọhụrụ a na ọnọdụ ọnọdụ Hadoop nwere ike inyefe akwụkwọ asambodo ahụ ma nweta ihe ọ na-ewe na ihe ọmụma banyere ikwe ka usoro ahụ na mmejuputa ya.
Ka ọzụzụ ahụ dị adị ma na-agba gị ume ijikwa ọnọdụ na ọnọdụ data dị adị n'ezie, asambodo ahụ na-egosi na ị nwere aka aka itinye aka na mpaghara ndị a na-achọsi ike.
Na-egosi na ị maara akụkụ niile nke nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ ma nwee ike inye aka ịzụ ndị ọzọ mgbe ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ.
Nzọụkwụ site nzọụkwụ iji kwadebe maka akwụkwọ nkwado Hadoop
Usoro ntinye akwụkwọ nkwado na-agụnye ihe gbasara 30 awa nke online ma na-ebi ndụ nkuzi nke ndị zụrụ azụ, ndị nkuzi a kwadoro ma kwadoro. Ị nwere ike ịnweta mgbanwe maka oge ndị ịchọrọ ịmụta ihe. Ị ga-arụ ọrụ ahụ, ndụ ahụ dị adị na-etinye aka na enyemaka ị ga-etinye aka na ezigbo ọrụ nke ụwa. Enwere nsogbu ole na ole ka ị mụta ihe, dị ka onye na-ahụ maka ịntanetị ga-enye gị 24 * 7 nke nwere ntanetị n'ịntanetị nke na-abịa kpọmkwem site na ọkachamara. Ị ga-enwetakwa nkwurịta okwu ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ nduzi na-ekesa mmekọrịta na ịkekọrịta nghọta gị mgbe ị na-enweta ihe n'aka ndị ọzọ. E wezụga uru ndị a na mmụta mmụta, ị ga-enwetakwa usoro nlekọta mmụta, nke na-ebuli nkwenye na ikike gị mgbe nile na-eme ka ị nọgide na-emelite ọhụrụ na mgbanwe ndị metụtara Hadoop.
Isi isiokwu na isiokwu dị iche iche nke nnyefe akwụkwọ nkwado Hadoop gụnyere:
Hadoop na nnukwu Data ije
Advanced HBase na Hive
Hadoop na Oozie gbasaa
Nhazi na mgbasa nke data site na itinye n'ọrụ nke Apache Spark
Nkụzi mmụta ntanetị ga-esite na kọmputa gị kwadoro ya ma nye gị ohere mpaghara. LMS ma ọ bụ usoro nchịkwa mmụta ga-enwe nbudata nbudata na ozi metụtara na ị ga-enweta usoro ahụ. Ịmụ ihe ga-abịarute gị mgbe ị gwụchara, ị ga - ejikwa ụlọ ájá ájá dịka nje HIV, PIG, MapReduce na HBase maka nchịkọta nchịkọta na Big Data n'oge ezigbo. Ihe ọmụmụ ndị a bụ ụlọ ọrụ-karịsịa ma na-emetụta mpaghara azụmahịa gụnyere mgbasa ozi, ụgbọelu, ụlọ ahịa, ego, na ndị ọzọ.
Ka a na-etinye ihe nkuzi na ọzụzụ na LMS, ị gaghị enwe mmetụta nke ọnwụ nke ọ bụla nke klas ahụ ma nwee ike ịnweta ha n'oge ọ bụla ịchọrọ. Ewezuga LMS, oge ndụ ahụ na-agbazi klaasị ọzọ maka ihe ndị ahụ dị iche iche ma ị nwere ike ịmụta isiokwu ndị ịchọrọ na adreesị na-esonụ ma ọ bụ nnọkọ klas.
Kedu ihe ndị a chọrọ maka akwụkwọ nnyemaaka Hadoop?
Ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịhọrọ maka akaebe Hadoop, ọ ka mma na ohere ị nwere ozi gbasara SL na Core Java. Ị nwere ike ịmụta ụda Java ma ọ bụ nwee ike ịme ha site na ịbanye n'akụkụ ọzọ.
Ị chọrọ PC na ọ dịkarịa ala 4 GB nke RAM, tinyere onye na-arụ ọrụ i3 (ma ọ bụ karịa) iji sonyere usoro online na ịmụta ya nke ọma. Ọ bụrụ na ị ghara imezu ihe ọ bụla dị mkpa, enwere ike inye gị ohere dịpụrụ adịpụ gaa na Hadoop site na ntọala ịmepụtara gị.
Gịnị mere Hadoop Training ga-eji rụọ ọrụ gị?
Ụlọ ọrụ kachasị mma nke ụwa, gụnyere MNC nke oke nha chọrọ ọkachamara IT nke nwere ike ijikwa nnukwu data ha ga-eji ma ọ bụ chekwaa. Ọdịdị data nwere ike ịdị oke ike ma wepụ ihe ọmụma ziri ezi na nke ziri ezi na ya nwere ike ịbụ ọrụ nsogbu na-enweghị atụ. Ndị na-agafe akwụkwọ nkwado Hadoop n'ụzọ dị irè nwere ike imezu ihe mgbaru ọsọ kama ngwa ngwa. Dika usoro Hadoop na-enwe ohere nke ga esiwanyewanye na nke obula kwa ubochi na onwa, otu asambodo na mpaghara a nwere ike ime ka i nwee nnukwu ihe omuma.
Ebe a na-enye ọzụzụ na-enye gị niile Big Data na-akwadebe ikike na ebumnuche iji mee ka ị bụrụ onye na-ahụ maka nnukwu data. Ọkụ aka aka na aka na usoro nke MapReduce, HDFS, HBase, Pig, Hive, Sqoop, Oozie na ndị ọzọ na-edozi ụlọ ọrụ. Ọzụzụ ọzụzụ na-enye gị ikike dị mkpa ma na-amụ na mpaghara gụnyere:
Ụdị ụdị usoro data
Nghọta maka ụlọ Hadoop 2x
Ntọlite ​​nke ìgwè ndị Hadoop ma na-edepụta ihe na-eme ka atụmatụ ndị na-ebelata ihe ngosi
Na-amalite na nchịkọta data site n'iji Hive, Pig, na YARN mee ihe n'etiti ụlọ ọrụ na ụdị dị iche iche
Mwepu nke Map Ịbelata na mmejuputa nke H Isi
Nhazi atụmatụ site n'aka Oozie
Na-arụ ọrụ na RDD nghọta nke Spark na ya dum usoro usoro
Inweta otua na ndụ nke ndụ na-agbasa na nyochaa nchịkọta metụtara nnukwu data.
Ihe omumu ndi ozo na egosiputa na mkpa nke Hadoop dika ihe di elu nke nhazi data di na aga n'iru na abawanye na nso nso. Akụkọ na-ekwu na ahịa Hadoop ga-adị gburugburu $ 99.31 tupu afọ karịa 2022, ọ ga-etolite na ọnụ ọgụgụ nke 42.1 na nso nso.
Ịmụta nnukwu data na Hadoop bụ ndị na-arụ ọrụ maka freshers na ndị ọkachamara IT ndị a zụrụ azụ. Ndị injinia, ndị na-ede akwụkwọ, ule, BI, DDW, na ndị ọkachamara ETL nwere ike ịmalite ịmụtakwu ihe ha na-eme ma jiri ha mee ihe iji nweta nnukwu data.
Onye nwe ụlọ ọrụ ọzụzụ nke Hadoop nke online ga-enyocha nkwụsị ikpeazụ gị, na n 'ohere ị gafere akwụkwọ ikike ahụ n'ụzọ dị irè, a ga-enye gị akwụkwọ ikikere Big Data na Hadoop. Asambodo ahụ na-anabata nkwenye na nnakwere oke. Ọtụtụ ndị na-eduga ụlọ ọrụ na ndị MNC bụ ndị nkuzi nke ọmarịcha ịkụzi n'ịntanetị na ntọala ntọala, ndị a na-ejikarị Wipro, Nokia, Cisco, Ford, IBM na ndị yiri ya. Ị nwere ike ịme ka obi sie gị ike na asambodo gị bụ ezigbo ya, ọ ga-enye gị ọrụ nke nnukwu ọkwa na ụgwọ.
Akwụkwọ nchịkọta Hadoop ga-eme ka ị ruru eru maka ụgwọ nke $ 98 k ma ọ bụ jiri nwayọ na ahụmahụ ahụ, ụgwọ ahụ na-abawanye n'ihu. Enwere ihe karịrị 4.4 nde isi ọrụ data gị ugbu a, ọnụ ụzọ mepere emepe na-arịwanye elu na ọnụego nke 12%. Ndị na-emepụta ihe na-ekpo ọkụ bụ ndị kachasị mma ma bụrụ ndị a na-achọsi ike mgbe data na-ewuli taa, na ị nwere ike ịbanye na bandwagon ugbu a iji nyochaa ọhụụ ọrụ ọhụrụ.
Akara Akara Ọrụ Ohere
Akwụkwọ ITIL - Ntuzi zuru ezu
Ikwado Onye Mmepụta Ugoop Interview - ihe ị ga-ama ma mee?
Ihe 10 I Kwesịrị Ịmara Banyere R, Eke Ọgba, na Hadoop